OBS-Hayyu Duree ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin haala yeroo irratti turtii taasisne daawwadhaa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOBS-Hayyu Duree ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin haala yeroo irratti turtii taasisne daawwadhaa.
OBS-Hayyu Duree ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin haala yeroo irratti turtii taasisne daawwadhaa.
የቀድሞ የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት አዛዥ ትናንትና በቤታቸው የተቃጣበቸውን የግድያ ሙከራ በተዓምር ብተርፉም ታሥሮ የት እንደደረሱ እስከአሁን አልተወቀም። መንግስት ከኦነግ ጋር በደረገው የሰላም ስምምነት መሠረት ትጥቃቸውን ፈትተው ወደ ፍንፍኔ የገቡት ጃል አብዲ ረጋሳ ፣ የኦነግ ሥራአስፈፃሚ ኮሚቴ አባል እና የማዕከላዊ ኦሮሚያ ዞን የኦነግ ተጠሪ ናቸው ። ጃል አብዲ ለመጨረሻ ጊዜ የታዩት 6 ኪሎ አካባቢ በሚገኘው የኦሮሚያ የ”VIP” ልዩ ኃይል መዘዣ ቅጥር ግቢ ነበር ። ጃል አብዲ ታፍኖ የተወሰዱበት ቦታ ባለመታወቁ ቤተሰቡ እና ጓደኞቹ ከፍተኛ ስጋት ላይ ናቸው ።
Prof Eskel Gabbisaatiin
Hooggansi ABO hidhamaniiru. Kun waan haaraa miti. Hooggansii fi miseensooni ABO erga dhaabni kun hundeeffamee jalqabee ni hidhamu. Wanti kaleessa ta’e akka dhufaa ture akeekkachiifni kennamaa ture.
1) Obbo Leencoo Lataa torbaan lamaan dura jalqaba OMN itti aansuun Ltv irraatti “dhaabni magaalaa kana jiru hidhattoota waliin hariiroo qabu qulqulleessee nuuf ibsuu qaba” jedhee himee ture. Gazeexeesituun Ltv lee ABOn waraanaa wajjiin hariiroo hin qabu jettee sirreessuuf yaaltullee Obbo Leencoon “ABOn ibsa ejjennoo deggersa ‘shiftootaa’ baaseera, kanatu ragaadha” jechuun hoggansaa ABOtti quba qabuu eegale.
2) Torbaan darbe keessa Jeneraal Birhaanuu Julaa ragaadhuma Obbo Leencoon tuqe caqasuun “ABO fi shiftoota gidduu wal quunnamtiin akka jiru himuun “ragaa irratti sassaabamaa jira” jechuun waan mootummaan karoorfatee jiru ibsanii turan.
3) Prezidaantiin MNO Shiimallis Abdiisaa “milla tokkoon ala dhaabatani miilla tokkoon mana keessa dhaabbachuun hin danda’amu
Aangawooti mootummaa aangoo qaban humnaan tikfachuutti adeemaa akka jiran ifaa ture jechuudha.
Waanuma seenaa ABO kessatti beekamutu ammas ta’aa jira.
Hooggansi ABO duras gaaga’amaafi balaa dhuufuuf deemu beekaanii biyyatti galan. Hidhamuu qofaa miti lubbuun wareegamuun akka jiru beekanii qabsootti galan. Wareegamni qabsoo hin guddisa malee hin quuccarsu.
Hidhaa kaleessaa ilaalchisee waan haaraan yoo jiraate tokkooffaan hidhaan dararamuun kan miseensota ABO kumaatamaan lakkaawwaman irra gahaa ture, amma gara hoggansaatti ol bahuu isaati. Qabsoo keessatti boqonnaa tokko akka ta’e beekuu barbaachisa.
Lammaffaa, hidhaamuun qabsoo akka cimsu kan hin beekne mootota Itiyoophiyaa duwwaadha. ABO dhabamsiisuuf mootiin itti hinduulin hin jiru. ABOn duula itti banameen hin duune. Hardhas dheeratee dhaabbatee jira. Kan hin jirre warra duula irratti banedha. Yoo kun dhara jetttan, Haaylesillaasee, Mangistuu, Mallasaa gaafadhaa. Yoo dhugaadha jettan, maaqaa sadan ani tarreessee kanatti maqaan tokko itti dabalamuun hin ooltu.
“Walgahii GHO har’a taa’ame jedhame sana ABOn hin hirmaanne. Hidhaa juumlaa nurratti utuu raawwatuu ABOn haamilee ittiin masaraa mootummaatti mariif taa’u hin arganne. Obboleessi koo Jawar Mohammed GHO jalatti marii biyyaarra oolle jedhe. Kan walitti isaan qabe MM ti. Mariin biyyaa sun dhimma laga Abbayaa ta’uu isaati. MM gaaf nagaa waan barbaade hojjetaa gaafa rakkoon isa qunnamtu ammoo GHO daboo kadhachuun amala ta’eera. Waan hundaafuu ABOn akka hin hirmaatiin haa hubatamu.”
Villagers in Ethiopia are bleeding from their noses and mouths before dropping dead as mystery sickness is blamed on toxic waste from Chinese oil drilling
ONN : Hoggantoota ABO hidhamuu ilaalchisee marii gabaabaa